Ifulethi lase-Seaside Ipsos - I-Airbnb
Ifulethi lase-Seaside Ipsos
Kato Agios Markos, i-Greece
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Konnect
U-Konnect uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
Siyakwamukela ku-Seaside Ipsos Apartment! Itholakala enhliziyweni ye-Ipsos nayo yonke into ebangeni eliseduze. I-2-bedroom, ifulethi elithokomele, elilungele imindeni, abangani kanye nezithandani. Itholakala endaweni enhle eduze ne-Ipsos Beach, esitobhini samabhasi esimaphakathi nedolobha kanye nazo zonke izinhlobo zezitolo njengezindawo zokudlela, amakhefi, izindawo zobumnandi, amakilabhu, izitolo zezingubo namakhemisi. Umzuzu nje ongu-1 uhamba ngezinyawo ukusuka ogwini kanye ne-15km ukusuka e-Corfu Town ngebhasi. Jabulela amaholide akho ngaphezulu kwalokho obungakulindela!
I-Seaside Ipsos Apartment iyifulethi elinamagumbi okulala amabili elisanda kulungiswa, elihlangabezana nezindinganiso eziphakeme zezivakashi ezinhle. Indawo ekahle yabangane nemindeni, abafuna ukuthola hhayi indawo eseduze kuphela, kodwa futhi nokuphumula ngezinsiza zesimanje.
Indlu inamakamelo okulala ama-2, igumbi lokuhlala eli-1, ikhishi eli-1 elihambisana nendawo yokudlela kanye negumbi lokugezela elilodwa. Kuzotholakala ikamelo elilodwa lokulala elikhulu elinemibhede yabantu ababili, kuyilapho izivakashi zingalala ekamelweni elinemibhede engamawele. Indlu ingakwazi ukuhlalisa izivakashi ezingafika kwezi-5, lapho izihambeli zesi-5 zilala embhedeni weloli.
Kokubili igumbi lokudlela nekhishi kufakwe izinsiza zesimanje. Yonke indawo ine-Wi-Fi yamahhala, kuyilapho ine-air-conditioning. Kukhona i-TV eyi-flat-screen egumbini lokuphumula, lapho endaweni efanayo kukhona ikhishi netafula lokudlela. Ikhishi linazo zonke izinhlobo zezinsiza ezifana nohhavini, i-stove top, igedlela likagesi, i-toaster nomshini we-espresso.
Wonke amagumbi okulala axhunywe kuvulandi, lapho kunendawo yokuhlala yangaphandle. Okokugcina, igumbi lokugezela lisanda kulungiswa ngeshawa. Ngokubhuka ngaphezu kweviki elingu-1, kuzoba noshintsho lwamalineni namathawula. Amathawula ama-2 anikezwe umuntu ngamunye (ithawula lesandla nethawula lomzimba).
I-Ipsos yaziwa kakhulu ngogu lwayo oluyikristalu nempilo yayo yasebusuku. Le ndawo yaziwa kakhulu ngokuwa kwayo njalo ngenkathi yasehlobo ngenxa yezindawo zayo zobumnandi ezihlukene namakilabhu, ezungezwe indawo yayo yemvelo. Kuyinhlanganisela yempilo yokuvakasha, nakuba ingamoshi indawo ezungezile yemvelo ngezihlahla zesundu kanye nogu olude olubanzi. Kukhona nezindawo zokudlela ezinhle ezitholakala kunoma yikuphi okuthandayo, kusukela ekudleni kwasemgwaqweni kuya emathaveni endawo kanye nokudla okungavamile okufana ne-chinese, i-italian njll. Ungathola futhi zonke izinhlobo zezitolo njengezitolo zezingubo, izitolo zezivakashi zanoma yiziphi izidingo kanye ne-super super. -izimakethe. Indawo ekahle yabangane nemindeni phakathi nosuku. Umugqa webhasi oqondile ne-Corfu Town!
Inombolo yepholisi: 00001544985
Hlola ezinye izinketho ezise- Kato Agios Markos namaphethelo